Mutungamiri weNyika, VaEmmerson Mnangagwa, Vanoti Havasi Kuzotambira Huori
Mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vatura mashoko avo kekutanga semutungamiriri wenyika pasi pechirongwa cheState of the Nation vachivhura paramande zviri pamutemo.
VaMnangagwa vati dare iri richagadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisirwo emabhizimisi, kurwisa huwori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu.
Vachitaura kekutanga muparamende kubva zvavagadzwa semutungamiri wenyika, VaMnangagwa vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika.
Asi vati hurumende yavo iri kuedza napose painogona napo kugadzirisa nyaya dzehupfumi, nyaya dzekushaikwa kwemari munyika.
VaMnangagwa vati nyika icharamba ichandisa mari yekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka uyewo vazivisa kuti vari kutora matanho ekuti nyika iwane mari yekunze.
Vati pane mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekunze akatowanikwa achashandiswa nevemabhizimisi kutanga svondo rino senzira yekupedza dambudziko rekushaikwa kwemari yekunze iro rave kukonzara kuti zvinhu zvikwire zvakanyaya munyika.
Vakurudzira kushanda zvakanaka pakati pehurumende, paramende, mabizhimisi nevamwe vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti nyika ifambire mberi.
Vati huwori hauchadiwa zvachose uye vese vachawanikwa vachiita huori, vacharangwa.
VaMnangagwa vati pane mabhiri anodarika makumi maviri achazeyiwa mudare iri ane chinangwa chekuretsa basa kune vanoda kutanga mabhizimisi, mabhiri achaita kuti nyika iwane mari yakawandakubva kuzvicherwa nezviwanikwa zvayo, kuvandudza mashandiro emakanzuru ekumaruwa nemadhorobha pamwe nemumaguta nehurumende dzematunhu.
Mamwe mabhiri aya ndeanoti, Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, Mines and Minerals Amendment Bill, Gold Trade Bill and The Precious Stones Bill neCo-operative Societies Amendment Bill.
Vatiwo hurumende yavo inoda kuvandudza mashandiro evatapi venhau nekudaro paramende ichazeyawo mutemo weZimbabwe Media Commission Amendment Bill uye mutemo weBroadcasting Services Act uchavandudzwa.
Mumiriri weNorton muNational Assembly, VaThemba Mliswa, vaudza Studio7 kuti vatambira nemufaro mashoko emutungamiriri wenyika sesvo achitaura zviri kuitika munyika.
Asi vati havafari kuti hurumende haisi kurwisa huwori zvakasimba uye iri kuramba ichishandisa mari yakawanda.
Mutungamiriri wemadzishe munyika, Ishe Fortune Charumbira, vati zvatarwa naVaMnangagwa zvinoratidza kuti vari kutevedzazvavaitaura kubvira pavakapinda panyanga gore rapfuura.
Mumiriri weChivi South muNational Assembly, VaKiller Zivhu, vaudza Studio7 kuti vafara kuti mutungamiri wenyika vari kuda kuti mashandiro emakanzuru ekumaruwa avandudzwe.
Mukuru wesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust, VaJohn Makamure,vaudza Studio7 kuti hurongwa hwaVaMnangagwa hwakanaka chose uye chasara kuti makurukota avo aunze mabhiri avatura kudare.
Hurongwa hwaparurwa nemutungamiri wenyika ndihwo hunotarisira kutevedzwa neparamende uye panguva yaVaRobert Mugabe semutungamiriri wenyika handi mabhiri ese avaitaura pakuvhurwa kweparamende iaunzwa kudare.
Kunyange hazvo nhengo dzeMDC Alliance dzabuda mudare apo VaMnangagwa vange vachivhura paramende, dzati dzichange dzichipinda muparamende dzichizeya mabhiri aya nedzimwe nyaya.